Tuberculin - यो के हो?
आजको चुनौतीपूर्ण वातावरणमा रूपमा उचित स्तर मा आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य कायम राख्न? आखिर, बिल्कुल सबैलाई आफूलाई राम्रो महसुस गर्न रोगहरु दिनचर्या जीवन तोड्न गर्न अनुमति छैन चाहन्छ र। यो गर्न, एक प्रारम्भिक उमेर देखि बच्चाहरु यसलाई भविष्यमा संक्रमण रोक्न वा कम्तिमा हुनेछ यसको प्रवाह सुविधा आशामा विभिन्न रोगहरु विरुद्ध खोप। यस लेखमा हामी यस्तो प्रभाव छलफल हुनेछ निवारक उपाय, तर प्रारम्भिक चरणमा खतरनाक संक्रामक रोगहरु निदान गर्न मद्दत गर्ने उपकरण ध्यान। यी चरणहरु मा रोगहरु पत्ता जीवन जोखिम बच्न र पूर्ण रिकभरी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यी लागूऔषधको एक "tuberculin" छ। कि के हो? साधनहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ कस्तो व्यवहार गर्ने? यो बच्चाहरु र किशोरों लागि प्रयोग गर्न खतरनाक छ कि छैन भनेर? के मा अवस्थामा यो दबाइ को आवेदन त्याग्न गर्नुपर्छ? यी सबै विवरण यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
दबाइ "Tuberculin": संरचना
भन्ने बित्तिकै छलफल दबाइ एक मिश्रण गर्मी प्रयोग मारे गरेको गरिएको र precipitated केही माइकोबैक्टीरियम क्षयरोग filtrates छ trichloroacetic एसिड संग। यी जीव ध्यान इथाइल अल्कोहल र ईथर, एक विशेष समाधान मा एनेस्थेसिया लागि प्रयोग गरिन्छ जो, र त्यसपछि भंग संग व्यवहार हो। उत्तरार्द्ध एक मिश्रण छ फस्फेट buffered नुनखरा, को Tween-80 (प्रभावकारी stabilizer) र phenol (गुणात्मक संरक्षण गर्ने बस्तु)। पनि "Tuberculin" Homeopathy प्रयोग गर्दछ। तर, हामी उपचार यस प्रकारको गर्न अघि, तपाईं सधैं एक चिकित्सक संग परामर्श गर्नुपर्छ।
तयारी "tuberculin" इंजेक्शन लागि समाधान को रूप मा उत्पादन गरिएको छ। यो सबैभन्दा छिटो कार्य हालतमा प्रदान गर्दछ।
टीका "Tuberculin" प्रति milliliter एक milliliter को एक-दशौं (वा दुई tubekrulinovye एकाइहरु) (दस खुराक), दुई milliliters (बीस खुराक) वा तीन milliliters (तीस खुराक) को सील मात्रा मा विशेष जारी गर्न सकिन्छ। प्रत्येक प्याकेज दस अलग vials समावेश गर्दछ।
केही अवस्थामा, एक purified "Tuberculin"? (जनसंख्याको ठूलो संख्या लागि) tuberculin लागि यो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। यस क्रममा गरेको छ:
पटक-पटक गर्ने BCG खोप आवश्यक छ विरामीहरु को समूह चयन गर्नुहोस्;
प्राथमिक खोप लागि बच्चाहरु तयार गर्न दुई महिना
माइकोबैक्टीरियम क्षयरोग संक्रमण उपस्थिति पहिचान लागि;
नाबालिग मा क्षयरोग को प्राथमिक (वा स्थानीय) प्रकारका पहिचान गर्न।
मान्छे तयारी "tuberculin" निर्देश पुस्तिका intradermally सेट गर्न एक दृश्य संग केवल प्रबन्ध सुझाव पनि Mantoux परीक्षण। यो कहिलेकाहीं भावनात्मक labile व्यक्तिहरूलाई मा बेहोशी गराउँछ रूपमा रोगी, बसिरहेका छ भने मात्र आवश्यक इंजेक्षन गर्न। "Tuberculin" निर्देशन को माध्यम को परिचय को लागि कडा सुझाव मात्र विशेष सीरिंज (odnogrammovye) प्राप्त। तिनीहरूले छोटो पातलो सुई संग डिस्पोजेबल छन्। को इंजेक्शन इन्सुलिन सीरिंज वा सामाग्री को लागि उपयुक्त छैन, जो को आफ्नो जीवन समाप्त भएको छ।
दवादारू को बोतल ध्यान राम्ररी semidesyatigradusnym इथेनल गर्भवती छ, जो gauze, संग हटाउन हुनुपर्छ। त्यसपछि, ग्लास ampoules खोल्ने लागि डिजाइन शुद्ध ब्लेड को ampoule को घाँटी घिसना र त्यसपछि बन्द तोड्न। को सिरिंज प्रयोग टीका (अर्थात्, एक milliliter दुई-दहाई) को दुई खुराक डायल को शीशी दवादारू हटाइएको छ। यस पछि यो एक पातलो सुई प्रत्यारोपण र एक बाँझ कपास swab मा तरल को रूप बाट मिलाईएको आधा रकम जारी गर्न आवश्यक छ। Unsealed शीशी दुई घण्टा भन्दा बढी भण्डारण गर्न निषेध गरिएको थियो।
आवश्यक इंजेक्शन को कार्यान्वयन अघि, छाला semidesyatigradusnym इथाइल अल्कोहल सफा गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र त्यसपछि यसलाई राम्ररी एक बाँझ कपास ऊन संग सुकेको थियो। यो सुई ध्यान छाला सतहमा समानान्तर प्रविष्ट गर्नुपर्छ। दुई tuberculin एकाइहरु (वा milliliter को एक-दशौं) छ जो प्रति खुराक सिरिंज प्रभाग, द्वारा कडाई प्रशासित।
गाई (bovine अवधि) - त्यहाँ विरामीहरु दबाइ "Tuberculin" संचालन गर्न आवश्यक गर्ने अर्को समूह छ। पशुहरू 0.2 घन सेन्टिमिटर वा 0.1 घन सेन्टिमिटरले palpebral दवादारू संग intradermally प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ।
परिणाम लागि कसरी खाता?
"Tuberculin" दबाइ संग निदान को परिणाम कसरी विश्लेषण गर्ने? पुस्तिका कडा मात्र योग्य चिकित्सा पेशेवर यसलाई सही तरिका गर्न सक्षम हुनेछ देखि यसको लागि, विशेषज्ञहरु लागू गर्न सुझाव दिन्छ। परिणाम ( "tuberculin" तैयारी को परिचय पछि तुरुन्तै गठन) मिलिमिटरमा मा को हिसाब छ जो को आकार नाप्ने papules मार्फत इंजेक्शन पछि सत्तरी-दुई घण्टा पछि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो कार्य विशेष यो लाइन को लागि डिजाइन गरेर बाहिर छ।
जब आकलन को Mantoux परीक्षण परिणाम निम्न वर्गीकरण द्वारा निर्देशित गर्न सकिन्छ। को papule सिद्धान्त फारम गर्दैन यदि प्रतिक्रिया नकारात्मक विचार थियो; शङ्कास्पद - यदि त्यहाँ घुसपैठ छ, आकार, जो दुई चार मिलिमिटरमा देखि फरक हुन्छ। को papule आकार छ भन्दा मिलीमीटर छ भने, परिणाम सकारात्मक मानिन्छ, र यदि यो सत्र मिलिमिटरमा एक बच्चा वा किशोर र बीस-एक मिलिमिटर वयस्क नाघ्यो - hyperergic।
पदार्थ को परिचय गर्न प्रतिक्रिया
यो दर मात्र शरीर व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्तेजना प्रतिक्रिया सक्षम छ कसरी निर्भर गर्दछ। कहिलेकाहीं विषय पदार्थ वृद्धि संवेदनशीलता संग विरामीहरु जस्तै lymphangitis र lymphadenitis रूपमा अप्रिय प्रतिक्रिया हुन सक्छ। अन्य प्रतिकूल प्रतिक्रिया टाउको दुखाइ, सामान्य फ्रेंच, तापमान मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो।
केही विरामीहरु (जस्तै, नकारात्मक tuberculin प्रतिक्रिया संग छोराछोरी, जो BCG र स्वस्थ वयस्क, जसको को टीबी छाला परीक्षण गर्न प्रतिक्रिया सकारात्मक वा सन्देहपूर्ण छ संग गर्न सकिन्छ) कुनै पनि निवारक खोप बाहिर हुन सक्छ केवल Mantoux परीक्षण परिणाम एक योग्य मूल्यांकन पछि।
"Tuberculin" - को निदान को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो।
तर, सबै प्रश्न, टीका प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसैले, त्यहाँ दबाइ "Tuberculin" को भर्ना मा केही प्रतिबन्ध छन्। प्रयोगको लागि निर्देशन निम्न अवस्थामा लागूऔषधको प्रयोग गर्न निषेधित: मिर्गी, अस्थमा, छाला रोग, idiosyncrasies, तीव्र बाथ ज्वरो, पुरानो वा तीव्र संक्रमण वा systemic रोगहरु को उपस्थिति मा (विशेष गरी exacerbation को क्षणमा)।
लक्षण सबै माथि अवस्था गायब मात्र पछि एक महिना, तपाईं Mantoux परीक्षण राख्न सक्नुहुन्छ। वा यो संगरोध को औपचारिक हटाउने पछि गर्नुपर्छ।
यो आफ्नो टोली कुनै पनि संक्रामक रोगहरु को एक संगरोध छ यदि Mantoux छोराछोरीलाई राख्न निषेध गरिएको छ।
"Tuberculin" को प्रभाव कुनै पनि निवारक खोप प्रभाव। दबाइ संग निदान खोप यस प्रकार, वा एक महिना त गर्नुपर्छ।
तपाईं पूरा अघि पनि tuberculin परीक्षण, विशेषज्ञ विरामीहरु जाँच्न र contraindications पहिचान गर्न तिनीहरूलाई अन्तरवार्ता पर्छ। यो अप्रिय परिणाम धेरै जोगिन मदत गर्नेछ।
माथिको सामाग्री प्रयोग गरेर निम्न विषयमा बुझ्न सजिलो हुनेछ। "Tuberculin" - भनेर के? म यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ? केही अवस्थामा, यो कोष को प्रयोग नगर्न चतुर हुनेछ? कसरी इंजेक्शन यस प्रकारको पूरा गर्न? यो जानकारी दबाइ "Tuberculin" को प्रयोग संकेत गर्नेहरूका लागि आवश्यक हुनेछ। यसलाई ध्यान दिएर जो आफैलाई या आफ्नो बच्चा चोट छैन, आफ्नो विरामीहरु विशेषज्ञहरु प्रदान सबै सिफारिसहरू, पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। साथै, हेरफेर यस प्रकारको बाहिर प्रशिक्षित दक्ष स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा विशेष लगे हुनुपर्छ। यी सबै वस्तुहरू अनुपालन यो प्रक्रिया को सफलता सुनिश्चित हुनेछ।
अन्य कुराहरु, यो टीका प्रयोगको लागि सामान्य दिशानिर्देश सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, एक बच्चा वा वयस्क जसको शरीर हाल कुनै पनि संक्रमण कमजोर छ वा जो हालै यस्तै रोग भोगे, को कलम बांधने, विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउन सक्छ (जस्तै एक इंजेक्शन गर्न शरीर गरेको प्रतिक्रिया धेरै गम्भीर हुन र चिकित्सा हेरविचार आवश्यक सक्नुहुन्छ)। तपाईं कुनै पनि साइड इफेक्ट अनुभव भने, यो तुरुन्त विशेषज्ञ परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
आफू र आफ्नो परिवारको लागि उच्च गुणस्तरीय उपचार चयन गर्नुहोस्। आज संग निदान राम्रो शारीरिक स्थिति कायम गर्न मद्दत गर्छ कि यस्तो प्रभावकारी उपचार को भाग हुन सक्छ दबाइ "Tuberculin" छलफल। आफैलाई बेवास्ता र स्वस्थ रहन छैन!
आफ्नो हृदय चक्की लागि भिटामिन - लागूऔषधको सूची
औषधि "Fenistil" (बच्चाहरु को लागि खस्छ)। प्रयोगको लागि निर्देशन
"Budesonide": प्रयोग र analogues लागि निर्देशन। "Budesonide" inhalation: समीक्षा, मूल्य
एनालग लिन "Jodomarin" वा मूल प्रयोग गर्ने?
अक्षरहरू र तिनीहरूलाई प्ले गर्ने अभिनेता, "ब्वाँसो सूर्य" - सोभियत-पोलिस टकराव बारेमा श्रृंखला
पनामा को राज्य को प्रतीक। झन्डा र यसको इतिहास
सर्तहरू आगो निभाउने प्रयोग गर्नुहोस्। आगो निभाउने कसरी प्रयोग गर्ने
जहाँ Thoroughbred बिरालो खरिद गर्न
Osteopathy चिकित्सकीय निर्देशन - यो के हो?
Schmuck को हो? शब्दको अर्थ र व्याख्या
बढाउनुहोस्-को पीठ triceps देखि: कार्यक्रम प्रविधी र सिफारिसहरू विशेषताहरु